ukhona lapha: Ikhaya umzimba Ukunakekelwa Nezenhliziyo kwa-Israyeli
Minyaka yonke emhlabeni wonke esimiso senhliziyo nemithambo yegazi baphathe izimpilo abaningi, kuka kuka oncological. Cishe wonke umuntu ngomzuzu umuntu emhlabeni kwenzeka isilethikusebenza. Nakuba, ukuthi leli qembu izifo kakhulu evimbela indlela efanele yokuphila, abantu abaningi bamshaya indiva ngokwanele ukuba impilo yabo, okuholela nemiphumela eyingozi kakhulu. Mayelana isimo, ekwelapheni isifo senhliziyo ngo-Israyeli ize kuqala ezweni lonke. ukunakwa okukhulu Sizokwenza ngcono izinga lempilo, kanye nokukhuphula ubude bayo. Odokotela babe iziqu zemfundo futhi bathuthukise amakhono abo semitholampilo engcono yamazwe ahlukene. yezokwelapha izikhungo gumbi ifakwe imishini eziphambili, okuyinto, sibonga uxhaso ehloniphekile, esetshenziswa for lungene kweminyaka emihlanu.
Izindlela ukuxilongwa kanye nokwelashwa isifo senhliziyo
Izinga ehloniphekile yentuthuko imithi ivumela uphethwe ngempumelelo kanye nokwelashwa yinhliziyo kwa-Israyeli, kwasekuzalweni, angina, izimila inhliziyo, myocarditis, ukuqhuba wokufakelwa inhliziyo valve futhi anakekele iziguli nezinye izifo eziningi emkhakheni. Ethandwa kakhulu ulwazi izindlela zokuxilonga namuhla-magnetic resonance imaging futhi radionuclide, ultrasound kanye nocwaningo endovascular, echocardiography, nezinye izinqubo eziningi. Okwamuva ubuchwepheshe digital ukuvumela ochwepheshe ezikhethekile ukudala imodeli unhlangothi-ntathu ezisekujuleni kwenhliziyo futhi izindiza zayo, kanye ukuhlola izici ukugeleza kwegazi. Ngesisekelo iqembu inhlolovo odokotela ezikhethekile eba uhlelo ngabanye zokwelapha, okuyinto uyakucabangela onezimfanelo isiguli. ukuphathwa Steel ka yenhliziyo Umthambo isifo, yisifo senhliziyo noma ezimbi azenzile wenziwa kuphela ephephile amasu kancane koda, ukuthi ukunciphisa izingozi tekusebenta futhi wenze isenzo njengoba esheshayo nengebuhlungu.
izindlela Eyingqayizivele nezenhliziyo kwa-Israyeli
Omunye izinzuzo ezingukhiye nezenhliziyo yezwe - it is a ukuthuthukiswa njalo imigqa emisha yokwelapha. Kukulo muzi lapho sidalwe zaqala ukusetshenziswa ngo Umkhuba stents eliyingqayizivele ukuze silwe yenhliziyo Umthambo isifo, isilandelwa kumbhali indlela ephumelela kakhulu ka ablation ekwelapheni arrhythmias, futhi kancane imisebenzi koda ezisetshenziswa ukuze aqede izinkinga zokwakheka-fetus. Eyayenziwe wadala inhliziyo titanium, okuyinto ukala 140 amagremu, Kwakungisiza ekusindiseni ukuphila lenqwaba iziguli, ababelindele sako ukuze ukufakelwa. Ayikho inzuzo engaphansi ebalulekile nezenhliziyo Israeli - ukutholakala kwalo. Namuhla kungenzeka ibhekane ukwelashwa Israyeli ngamanani, okuyinto mancane kakhulu kunalawo European futhi American. Thola intengo kwangaphambilini yokwelapha kungaba, ebhekisela inkampani israel-hospitals.ru.